Global Voices teny Malagasy » Mozambikana mpanora-gazety sy mpikatroka lasibatry ny fandrahonana amin’ny taom-pifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Oktobra 2019 4:44 GMT 1	 · Mpanoratra Dércio Tsandzana Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Mainty, Mozambika, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fifidianana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Mitsipaka hatrany  ny voka-pifidianana ny antoko mpanohitra lehibe indrindra, ny antoko RENAMO, hatramin'ny taona 1994. Ampangainy ho mangala-bato ny FRELIMO. Mitsipaka izany ny governemanta.
Mandritra izany fotoana izany, asongadin'ireo  iraky ny Ivontoeram-pifidianana ho amin'ny demaokrasia lovainjafy eto Afrika sy ny Vondrona Eoropeana ny tsi-fetezana ao amin'ny lisitry ny mpifidy ary melohiny ny heritsetra izay lazainy ho manimba ny fanentanana.
Na izany aza,nanambara  miaraka ny iraka mpanaramaso avy amin'ny Vondrona Afrikana,ny vondron'ny firenena mpiteny paortiogey ary ny SADC fa “nizotra araka ny tokony ho izy sy tamim-pilaminana” ary “manaraka ny fenitra iraisampirenena” ny fifidianana ary “maningana” ireny trangan-kerisetra izany ka tsy mahasakana ny fahafenoan'ny fizotram-pifidianana.
Ny voka-pifidianana ampahany  no mampiseho ny filoha Filip Nyusi ho mitarika ho amin'ny ifidianana azy indray mahazo vato mihoatra ny 75%. Heverina hahazo ny roatokon'ny seza ao amin'ny antenimiera tokandoha sy ny governoram-paritra rehetra miisa 10 ny antoko FRELIMO, izay nitondra an'i Mozambika hatramin'ny taona 1992.
Naorina tamin'ny taona 2004 ny FORCOM  izay tsenankevitry ny vondrona mpampiely feo ao Mozambika. Mahatratra hatramin'ny 45 any ho any ny vondrom-piarahamonina radio mpikambana ao aminy.
Tamin'ny 18 Janoary, nahazo  hafatra manindry sy mandrahona ho faty tamin'ny alalan'ny media sosialy i Fátima Mimbire, mpikatroka sady mpiasa taloha tao amin'ny Centre d'Integrité Publique  (CIP). Ny CIP no fikambanam-piarahamonina sivily manampy amin'ny fanarahamaso ara-pifidianana ao Mozambika.
Araka ny Amnesty , ‘’nanandra-peo hanaovana herisetra aminy ao amin'ny media sosialy ny mpitolon'ny FRELIMO fantadaza.’’ Mpikambana ao amin'ny parlemanta Alice Tomás  niantso ny hanolanana (hanaovana azy ankeriny) tamin'izany fotoana izany: ‘’Be resaka loatra ravehivavy ka tokony haolana lehilahy matanjaka sy mahery miisa 10 hampianatra lesona azy,’’ hoy ilay MP (mpikambana parlemantera) ao amin'ny Facebook.
Araka ny MISA-Mozambique, manery  ny mpanora-gazety hialokaloka any amin'ny toerana tsy fantatra ny fandrahonana izay mandeha any amin'ny WhatsApp any. Nanomboka nahazo fandrahonana ny mpanora-gazety tamin'ny marainan'ny 11 Oktobra 2018 rehefa namoaka ny voka-pifidianana monisipaly tany Moatize izay nahitana ny fandresen'ny mpanohitra ny gazetiny.
Tamin'ny fifidianana teo aloha, fitaovana lehibe nanana ny lanjany ny finday sy ny fifandraisana aterineto ho ezaka fanarahamaso ny fifidianana tao Mozambika . Nampiasa ny fakantsariny ny olompirenena mpanaramaso handraketana  izay rehetra olana na tsy fanarahan-dalàna amin'ny androm-pifidianana ho fandraisany anjara hampangarahara ny fizotram-pifidianana.
Tsy tahaka ireo firenena manodidina azy, tsy ahitana fandraketana famerana fidirana tambajotra mandritra ny fifidianana sy amin'ny mampanonjanonja ny politika i Mozambika. Malawi izao ohatra, manapaka amin'ny ampahany  ny aterineto sy ny media sosialy mandritra ny fotoam-panisana taorian'ny fifidianana 21 May, raha nametra  ny fidirana amin'ny media sosialy i Zimbabwe tamin'ny janoary, fa notapahiny tanteraka ny tambajotra tany amin'ny faritra sasany, ho setrin'ny fihetsiketsehana anti-governemanta.
Ny lahatsoratra dia ao anatin'ireo andian-dahatsoratra mamakafaka ny fitsabahana amin'ny zo nomerika amin'ny alalan'ny fomba tahaka ny fanakatonana tambajotra sy fandisoam-baovao mandritra ireo fotoan-dehibe ara-politika mitranga any amin'ny firenena afrikana fito: Alzeria, Ethiopia, Mozambika, Nizeria, Tonizia, Ogandà, ary Zimbabwe. Tohanan'ny Africa Digital Rights Fund avy ao amin'ny The Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa  (CIPESA) ara-bola ny tetikasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/25/144259/
 Mitsipaka hatrany: https://www.dw.com/pt-002/renamo-n%C3%A3o-aceita-resultados-eleitorais-em-mo%C3%A7ambique/a-50923601
 Ny voka-pifidianana ampahany: http://rprovisorio.stae.org.mz/Resultados/Provisorio2?khdkakyh281638127vjhgasndjhsgagsjhdgs897981273jhasgdjmashdjkhsad8739712hkashdkasjhd798137213kkjasdb=83272812&data_eleicao=15-10-2019&id_participacao=1&id_eleicao=0
 Centre d'Integrité Publique: https://clubofmozambique.com/news/mozambique-keeping-the-internet-open-for-a-free-election-cip-eleicoes-144234/
 fanarahamaso ny fifidianana tao Mozambika: https://globalvoices.org/2019/08/20/mozambique-pushes-for-sim-card-registration-raising-privacy-and-election-monitoring-concerns/
 manapaka amin'ny ampahany: https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-malawi-on-election-day-Q8oOrl8n